နိုင်ငံသစ်မှာ မလွတ်မြောက်နိုင်သေးသူများ | ဧရာဝတီ
ကိုညို (အော်စလို)| November 10, 2012 | Hits:18,334
15 | | ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် နိုဗဲလ်ဆို လက်ခံပွဲ အခမ်းအနား ကျင်းပခဲ့သည့် အော်စလို မြို့တော်ခန်းမ (ဓာတ်ပုံ – ရဲနည် / ဧရာဝတီ)
လေးဘက်လေးတန် နံရံဆေးရေးပန်းချီတွေက ခန့်မှခန့်။ လှိုင်းလေကြားမှာ အံတုယိမ်းရွဲ့နေတဲ့တံငါလှေကြီးတွေက ဒီလူမျိုးတွေရဲ့ ကြမ်းတမ်းတဲ့ ဘ၀နိဒါန်းကို ညွှန်းနေသလိုပဲ။ တချိန်က နာဇီစစ်ဖိနပ်အောက်က နိမိတ်ပုံတွေ၊ ရုန်းထ လွတ်မြောက်မှုရဲ့သင်္ကေတတွေ၊ စုစည်းအားနဲ့ နိုင်ငံသစ် ထူထောင်တဲ့ ပုံရိပ်တွေဟာ အော်စလိုမြို့တော်ခန်းမ မျက်နှာကျက်နဲ့ နံရံတွေမှာ မျဉ်းကွေး၊ မျဉ်းဖြောင့်၊ အရောင်တွေ၊ သင်္ကေတတွေနဲ့ လှမှလှ၊ ခန့်မှခန့်။
နံရံပန်းချီကားတွေ ကြည့်ပြီး ကိုသူရိန် စိတ်ထဲ အမည်တပ်လို့မရတဲ့ ခံစားမှုတခုက ၀င်လာတယ်။ ဒီနေရာ၊ ဒီအချိန်မှာအရပ် ဒေသ မတူ၊ အသားအရောင်ကွဲ၊ မျိုးနွယ်ကွာ၊ ဘာသာစကား ခြားနားသူတွေ ၃၀၀ ကျော်နဲ့ ဒီနေ့ အတူဆုံဖြစ်နေတယ်။ မတူတာတွေ အများကြီးထဲက သူတို့အားလုံး တူညီနေတာကတော့ မွေးရပ် ဇာတိကို စွန့်ခွာ လာခဲ့တာရယ်။ နိုင်ငံသစ်တခုကို ဒီကနေ့ကစပြီး ပိုင်ဆိုင်ခွင့်ရမှာရယ်၊ ဒါကတော့ ကံတူအကျိုးပေး တိုက်တိုက်ဆိုင်ဆိုင်ပဲ တူနေကြတယ်။
နိုင်ငံပေါင်း ၇၃ နိုင်ငံက နိုင်ငံသားသစ် ခံယူမယ့် ၃၀၉ ယောက်ဟာ သီးသန့်အခန်းတခုမှာ စီတန်းနေရာယူလိုက်တယ်။ သူနဲ့ အတူ မိမိတို့ ရိုးရာဝတ်စုံတွေ ကိုယ်စီဝတ်ထားတဲ့ မြန်မာနိုင်ငံက ကရင်အမျိုးသား ၃ ဦး၊ ချင်း အမျိုးသား ၆ ဦး လည်း ပါတယ်။
တရားရေးဝန်ကြီးက နော်ဝေ ဘာသာစကားနဲ့ ကျမ်းသစ္စာကို ရှေ့ကတိုင်ပေးတယ်။ သူတို့အားလုံးလည်း ကိုင်ထားတဲ့ စာရွက်ကို တပြိုင်တည်း ဖတ်ပြီး လိုက်ဆိုတယ်။
“ကျွန်ုပ်တို့သည် နော်ဝေးနိုင်ငံနှင့် နော်ဝေးလူ့ အဖွဲ့အစည်းကို ပံ့ပိုးကူညီပါမည်”
“ကျွန်ုပ်တို့သည် ဒီမိုကရေစီနှင့် လူ့အခွင့်အရေးကို ပံ့ပိုးကူညီပါမည်”
“ကျွန်ုပ်တို့သည် နော်ဝေးနိုင်ငံ၏ အခြေခံဥပဒေကို လေးစားပါမည်”
ကျမ်းသစ္စာ ကျိန်နေရင်း ကိုသူရိန် ခေါင်းထဲဖျတ်ခနဲ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့ NLD အဖွဲ့ လွှတ်တော်မ၀င်ခင် ကျိန်တဲ့ ကျမ်းသစ္စာ စကားလုံးတွေအပေါ် အလိုမကျဖြစ်ခဲ့တာကို သတိရဖြစ်အောင် ရလိုက်သေးတယ်။
ပြီးတော့ သူ့နှလုံးသားမှာ စူးခနဲ ဖြစ်သွားတယ်။ ဆုံးရှုံးလိုက်တာလား၊ ပိုင်ဆိုင်လိုက်တာလား၊ ၀မ်းနည်းရမှာလား၊ ၀မ်းသာရမှာလား၊ မကွဲပြားဘူး။ သေချာတာတခုကတော့ ဒီနေ့ကစပြီး သူ့ဇာတိနိုင်ငံနဲ့ ပြတ်စဲသွားတာပဲ။၂၄ နှစ်ကျော် အမေ့ရင်ခွင်ကနေ ဖယ်ကျဉ်ခံရပြီးမှ မွေးစားအမေရဲ့ ရင်ခွင်သစ်ထဲ ၀င်ရသလိုမျိုး။ ဒီကိုရောက်ပြီး ၇ နှစ်အကြာမှာ တရားဝင် စာချုပ်စာတမ်းတွေနဲ့ အမွေစားအမွေခံအဖြစ် ထာဝရခေါ်ထားလိုက်သလို ခံစားနေရတယ်။ အမေရင်းကို နှမြောတဲ့ စိတ်က ကျင်ခနဲရင်ထဲမှာ။
ရန်ကုန် တက္ကသိုလ် တတိယနှစ် (သချာင်္) မှာ ပညာသင်ရင်း ၁၉၈၈ မှာ ပြည်ပ ထွက်လာတော့ သူ့အသက်က၂၁ နှစ်အရွယ် လူငယ်ဘ၀။ သူ မြန်မာပြည် ပြင်ပမှာ နေခဲ့တာက ပြည်တွင်းမှာ နေလာတာထက် ၃ နှစ်တောင် စွန်းသွားပြီ။
“မြန်မာပြည်အကြောင်း အမြဲတမ်း တွေးနေတယ်။ အလုပ်လုပ်နေရင်းလည်း စဉ်းစားနေတာပဲ။ ကိုယ့်အိမ် စားပွဲပေါ်က ကွန်ပျူတာရှေ့မှာ အချိန်အားရတိုင်း မြန်မာပြည် သတင်းတွေ ဖတ်နေတယ်။ ကိုယ်နဲ့မြန်မာပြည်ဟာ လုံးလုံးလျားလျား ပတ်သက်နေတယ်လို့ စိတ်ထဲရှိနေတယ်၊ တနေ့မှဗမာပြည်ကို မေ့သွားတာ မရှိဘူး၊ တနေ့နေ့ပြန်ရမယ်လို့ မျှော်လင့်ချက်နဲ့ နေနေတာ။ အခု ၂၄ နှစ် ကြာသွားတာ အံ့သြစရာကြီး၊ မနေ့တနေ့ကလိုပဲ ထင်နေတယ်” လို့ ကိုသူရိန် က ဆိုပါတယ်။
ဗမာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာ ကျောင်းသားများ သမဂ္ဂ (ဗကသ) အဖွဲ့ချုပ် ဗဟိုကော်မတီဝင် ပြန်ကြားရေးဌာနကို တာဝန်ယူခဲ့ဖူးတဲ့ အသားဖြူဖြူ၊ ပိန်ပိန်သေးသေး၊ ဆံပင်တိုတိုနဲ့ ကိုသူရိန် ဟာ ၁၉၈၈ သြဂုတ်လ ၈ လေးလုံး အရေးတော်ပုံမှာ ပါဝင်ခဲ့ပြီး နောက်တရက် သြဂုတ်လ ၉ ရက်နေ့ ဗဟန်း ရွှေတိဂုံ အနောက်ဘက်မုခ်မှာ ထောင်နဲ့ချီတဲ့ လူထုကြီးကို ဦးဆောင်ဆန္ဒပြရင်း စစ်တပ်က ပစ်ခတ် ဖမ်းဆီးခံခဲ့ရသူ ဖြစ်ပါတယ်။
“နောက်ကနေ စစ်တပ်က ဒရကြမ်းပစ်တယ်၊ လူတော်တော်များများ ထိကုန်ပြီ၊ ကျနော့်ရှေ့ကျောပေးပြီး ပြေးတဲ့သူတိုင်း သေနတ် မှန်နေတော့ကြောက်ပြီး မပြေးရဲတော့ဘူး၊ လမ်းဘေး မြောင်းနားဝပ်နေတယ်၊ အဲဒီမှာ စစ်တပ်က ဆံပင်တွေဆွဲ၊ နားရင်းတွေ ရိုက်ပြီး တော်လှန်ရေးပန်းခြံမှာ စုဖမ်းထားတယ်၊ ည ၁၀ နာရီမှာ အလုံပိတ် ကားကြီးတွေနဲ့ တိတ်တိတ်လေး အင်းစိန်ထောင် ခေါ်သွားတယ်” လို့ ကိုသူရိန်က ၈ လေးလုံးကာလ အတွေ့အကြုံကို ပြန်ပြောပြတယ်။
အဲဒီနှစ် သြဂုတ်လ ၂၂ ဒေါက်တာ မောင်မောင် သမ္မတ ဖြစ်တော့ ကိုသူရိန်နဲ့ ကျောင်းသားတွေ ထောင်က လွတ်တယ်။ ၁၉၆၂ ခုနှစ် ဗုံးခွဲဖြိုချ ခံခဲ့ရတဲ့ ကျောင်းသားသမဂ္ဂ အဆောက်အအုံ မြေနေရာမှာ ၁၉၈၈ ဗကသ ညီလာခံကြီးကို ၈၈ သြဂုတ် လ ၂၈ ရက်မှာ ကျင်းပတယ်။ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့ ပထမဆုံး သ၀ဏ်လွှာအဖြစ် ဗကသထံ ပေးပို့ခဲ့တာကို စင်ပေါ်တက် ဖတ်ခဲ့ရတာသူ၊ အခုထိ ဂုဏ်ယူလို့ မဆုံးဘူး။
“အဲဒီနေ့က ဥက္ကဌ ကိုမင်းကိုနိုင် မိန့်ခွန်းပြောတဲ့ အချိန်ရယ်၊ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ပေးပို့တဲ့ သ၀ဏ်လွှာကို ဖတ်ကြားပါ့မယ်လို့ အစီအစဉ်မှုးက ကြေညာလိုက်တဲ့အဆုံး ရခဲ့တဲ့ လက်ခုပ်သံ တအုံးအုံးကို ကောင်းကင်အထိ ကြားရမယ်ထင်တယ်၊ ကျနော့် ဘ၀မှာ ဒီလောက်ကြီးမားတဲ့ သြဘာသံကို မကြားဘူးဖူး” လို့ ကိုသူရိန်က ဆိုတယ်။
စစ်တပ်က အာဏာသိမ်းပြီး နောက်တလမှာ ကိုသူရိန် အိန္ဒိယနယ်စပ်ကို သွားခဲ့တယ်၊ လက်နက်ကိုင် သင်တန်းတက်ဖို့ မဖြစ်နိုင်တာနဲ့ နောက်တနှစ် ပြည်တွင်းကို တိတ်တဆိတ် ပြန်ဝင်ခဲ့တယ်။ ထိုင်း-မြန်မာ နယ်စပ် ဆက်သွားပြီး မြန်မာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာ ကျောင်းသားများ ဒီမိုကရက်တစ် တပ်ဦး (ABSDF) ကျောင်းသား တပ်မတော်မှာ တာဝန်ထမ်းခဲ့ပြီး လက်နက်ကိုင် တိုက်ပွဲပေါင်း ၂၀ လောက် ဆင်နွှဲခဲ့ဖူးတယ်။
“၁၉၉၂လောက်က တနင်္သာရီမြို့နယ် သကျက်ရွာမှာ စစ်တပ်နဲ့ ပက်ပင်းသွားတိုးတာ၊ အခုထိမမေ့ဘူး၊ အနီးကပ် ဆော်ကြတာ၊ ဒီတခါတော့ ငါသေပြီ ဆိုပြီး မြေကြီးပေါ် ပြားပြားဝပ်၊ ရသမျှ ဘုရားစာတွေ ရွတ်ခဲ့တာ သတိရတယ်၊ ကျနော့် ရှေ့က ပန်းချီဆရာ ငွေထွန်း မိုင်းနင်းမိပြီး အပေါ်ကို မြောက်တက်သွားတာ၊ သူ မနင်းရင် ကျနော် နင်းမိမှာ၊ ကိုငွေထွန်းလည်း ခြေပြတ်ပြီး အဲဒီ ဒဏ်ရာနဲ့ပဲ ကျသွားရှာတယ်” လို့ သူက မှတ်မှတ်ရရ ပြန်ပြောပြပါတယ်။
၂၀၀၄ ခုနှစ်မှာ တော်လှန်ရေးနယ်မြေက ကရင်တိုင်းရင်းသူ အမျိုးသမီးတဦးနဲ့ အိမ်ထောင်ကျပြီး၂၀၀၅ ခုနှစ်မှာ နော်ဝေနိုင်ငံ ရောက်လာကာ သားသမီး ၂ ဦးနဲ့ မိသားစု ဘ၀သစ် ထူထောင်ခဲ့တယ်။
“ဒီရောက်တော့ အစိုးရက နေစရာ၊ စားစရာ၊ ၀တ်စရာ လိုလေသေးမရှိ ထောက်ပံ့တယ်၊ ပညာသင်ပေးတယ်၊ သားသမီးတွေစောင့်ရှောက် ပညာသင်တယ်၊ ကျန်းမာရေး တာဝန်ယူပေးခဲ့တယ်၊ အလုပ်ရှာပေးတယ်။ ကိုယ့်မှာရှိတဲ့ အရည်အချင်း နည်းနည်းလေးနဲ့ သူတို့ ပံ့ပိုးမှုကိုယူပြီး ဘ၀အတွက်ရှင်သန်စရာ နေရာတခုရခဲ့တယ်” လို့ ကိုသူရိန်က ဆိုပါတယ်။
နယ်မြေဧရိယာရဲ့ ၃ ရာခိုင်နှုန်းလောက်မှာ တနှစ် ၃ လပဲ စိုက်ပျိုးနိုင်ပြီး ပင်လယ်ငါးဖမ်းလုပ်ငန်းနဲ့ ခက်ခက်ခဲခဲ ရပ်တည်နေရတဲ့ နော်ဝေနိုင်ငံဟာ ၁၉၇၀ နှောင်းပိုင်း ပင်လယ်မြေအောက် ရေနံနဲ့ သဘာဝဓာတ်ငွေ့သိုက်ကြီးတွေ တူးဖော်ရရှိပြီးတဲ့နောက် ကမ္ဘာ့အချမ်းသာဆုံး စာရင်းဝင် နိုင်ငံကြီး ဖြစ်လာတယ်။ လူဦးရေ ၅ သန်း တောင်မပြည့်တဲ့ နော်ဝေးနိုင်ငံမှာ လုပ်သား အင်အားနည်းပါးလွန်းလို့ အစောပိုင်းက ရေနံတူး အလုပ်သမားတွေကို ပါကစ္စတန်နိုင်ငံကနေ ငှားရမ်းခေါ်ယူရပါတယ်။ နောက်ပိုင်းမှာ ကြွယ်ဝချမ်းသာလာလို့ ပြည်ပက အခြေချ နေထိုင်သူချည်းပဲ အခုဆို ၄ သိန်းကျော်လောက် ရှိလာပါပြီ။
၂၀၀၁-၂၀၀၂ လောက်ကစပြီး ဒီနေ့အထိ မြန်မာနိုင်ငံသား၂၀၀၀ ကျော်လောက် ခိုလှုံနေထိုင်နေတယ်။ အများစုက မလေးရှား၊ ထိုင်းနဲ့ အိန္ဒိယနိုင်ငံရောက် မြန်မာဒုက္ခသည်တွေဖြစ်ပြီး မြန်မာနိုင်ငံကနေ ဥရောပဘက် တိုက်ရိုက်ထွက်လာပြီး နော်ဝေးမှာ နိုင်ငံရေးခိုလှုံခွင့် တောင်းသူတွေလည်းရှိတယ်။
တနှစ်ကို မြန်မာနိုင်ငံသား အနည်းဆုံး ၁၅၀ ကနေ ၂၀၀ ကျော် အထိ နော်ဝေအစိုးရက လက်ခံတယ်၊ အခုနှစ်ကတော့ မြန်မာ ဒုက္ခသည်တွေကို နောက်ဆုံးအနေနဲ့ လက်ခံမှာ ဖြစ်တယ်လို့ နိုင်ငံရပ်ခြား ဒုက္ခသည်များ ကူညီစောင့်ရှောက်ရေး ဌာနရဲ့အဆိုကို ကိုးကားပြီး နော်ဝေနိုင်ငံထုတ် AfterPosen သတင်းစာမှာ ဖော်ပြခဲ့ပါတယ်။ ပါကစ္စတန်၊ ပိုလန်၊ ဆိုမာလီနဲ့ ဗီယက်နမ် နိုင်ငံသားတွေ အများဆုံးနေထိုင်တယ်။
လွန်ခဲ့တဲ့ ဇွန်လက အော်စလိုရှိ ဒီအဆောက်အဦးထဲမှာပဲ နိုဗဲလ် ငြိမ်းချမ်းရေးဆုရှင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်က
“နော်ဝေးနိုင်ငံဟာ အကြင်နာတရားရဲ့ ပြယုဂ်တခုပါပဲ၊ ကမ္ဘာမြေနေရာက အဖယ်အကျဉ်ခံခဲ့ရတဲ့ လူတွေအတွက် နေစရာ ပေးတယ်၊ သူတို့နိုင်ငံက မလွတ်လပ်၊ မလုံခြုံလို့ တိမ်းရှောင်လာတဲ့ လူတွေကို ခိုလှုံ စရာ နေရာပေးတယ် …. ကျမတို့ရဲ့ ရည်ရွယ်ချက်က ထွက်ပြေးခိုလှုံလာတဲ့ သူတွေ၊ အိမ်ရာမဲ့၊ ရည်မှန်းချက်မဲ့တွေ မရှိတော့တဲ့ ကမ္ဘာ့နေရာတိုင်းဟာ၊ လွတ်လပ်ငြိမ်းချမ်းစွာ နေထိုင်နိုင်မယ့် နေရာတွေဖြစ်လာဖို့ပါပဲ” လို့ ပြောခဲ့ပါတယ်။
တနှစ်တခါ နော်ဝေးအစိုးရက မြို့တော်ရဲ့ ဂုဏ်ကျက်သရေ နိုဗဲလ်ဆုချီးမြှင့်ရာ မြို့တော်ခန်းမ အဆောက်အအုံမှာ နိုင်ငံပေါင်းစုံက အခြေချနေထိုင်ပြီး ၇ နှစ်အကြာ နိုင်ငံသားအဖြစ် လက်ခံထားသူတွေကို အဆိုအက အတီးအမှုတ်တွေနဲ့ ပွဲတော်ကျင်းပပြီး နိုင်ငံသားအဖြစ် ကျမ်းသစ္စာ ကျိန်ဆိုပွဲ အခမ်းအနားကို ခမ်းခမ်းနားနား ပြုလုပ်ပါတယ်။ ခရိုင်အုပ်ချုပ်ရေး အကြီးအကဲတွေ၊ နော်ဝေး ပါလီမန်ဥက္ကဌ ၂ ဦး နဲ့ ပြည်ထဲရေးဝန်ကြီး၊ တရားရေးဝန်ကြီးတို့လည်း တက်ရောက်သလို၊ လူတယောက်ကို ဧည့်သည် ၂ ယောက် ခေါ်ပိုင်ခွင့်ရှိလို့ ခန်းမထဲမှာ လူ ၇၀၀ ကျော် ရှိတယ်။ လွန်ခဲ့တဲ့ ၂ နှစ် လောက်က စပြီး နှစ်စဉ် မြန်မာနိုင်ငံသားတွေ အနည်းဆုံး ၁၅၀ လောက်က နော်ဝေးနိုင်ငံသားအဖြစ် ခံယူနေကြတယ်။
“အသားအရောင် မျိုးနွယ်ပေါင်းစုံ ယဉ်ကျေးမှု ပေါင်းစုံ၊ ဘာသာအယူဝါဒက စပြီး မိမိတို့ ကျွမ်းကျင် တတ်မြောက်မှုတွေကို တကမ္ဘာလုံးက သယ်ဆောင်လာကြတာ မြင်ရတယ်၊ ဒီအတွက်မိမိတို့ လေးစားတယ်၊ တန်ဖိုးလည်း ထားတယ်၊ အခုအချိန်က စပြီး ကျွန်ုပ်တို့ အတူတကွ နေထိုင်ကြရတော့မယ်၊ အနာဂတ်ဘ၀တွေဟာ ဒီနိုင်ငံက လူ့အဖွဲ့အစည်းနဲ့ အံဝင်ခွင်ကျ ကိုက်ညီအောင် နေထိုင်ရတော့မှာဖြစ်တယ်၊ အားလုံး ဒီနိုင်ငံမှာ ကျင့်သုံးတဲ့ ဒီမိုကရေစီနဲ့ လူ့အခွင့်အရေးကို ပံ့ပိုး ကူညီကြရလိမ့်မယ်၊ တပါးသူတွေရဲ့ ဘာသာစကား၊ ယဉ်ကျေးမှု၊ ဓလေ့ထုံးတမ်းတွေကိုလည်း မဖြစ်မနေ လေးစားသွားရမှာ ဖြစ်သလို နိုင်ငံသားတိုင်း အခွင့်အရေးတန်းတူ ခံစားရမှာဖြစ်တယ်” လို့ ဆိုပြီး အခမ်းအနား အကြီးအကဲက နော်ဝေဘုရင် နှုတ်ခွန်းဆက် စာဖတ်ပြတော့ ကိုသူရိန် တယောက် မိမိနိုင်ငံရဲ့အဖယ်ကျဉ်ခံဘ၀ကို တွေးနေမိတယ်။
“ကျနော်ထွက်လာပြီး နောက်ပိုင်း၊ မိသားစုရဲ့ ပုံစံ ၁၀ (သန်းခေါင်စာရင်း) ကနေ ကျနော့် နာမည် ဖျက်သိမ်းခံလိုက်ရတယ်၊ မှတ်ပုံတင်လည်း မရှိတော့ဘူး။ ကိုယ့်ဇာတိမြေကို မြတ်နိုးတွယ်တာသူ တယောက်အတွက်တော့ ဒီနိုင်ငံသား ခံယူလိုက်တာဟာ တသက်တကျွန်း ထောင်ကျသွားသလိုပါပဲ၊ ဒါပေမယ့် ကျနော်ဟာ အစိုးရရဲ့ ခါးခါးသီးသီး အဖယ်ကျဉ်ခံခဲ့ရတယ်။ အမိမြေကို ပြန်လည် ခြေချခွင့်လည်း မရဘူး၊ အခုနှစ် နွေရာသီတုန်းက စင်ကာပူသံရုံးက တဆင့် မြန်မာပြည်သွားလည်ဖို့ ဗီဇာလျှောက်တာ လည်း ခွင့်မပြုခဲ့ဘူး” လို့ သူက ဆိုပါတယ်။
မြန်မာအစိုးရကတော့ မကြာသေးခင်ကပဲ ပြည်ပနေထိုင်တဲ့ မြန်မာတွေ သက်ဆိုင်ရာနိုင်ငံရဲ့ နိုင်ငံသား ခံယူထားတာကို PR (Permanent Residence) စနစ်နဲ့ အမြဲတမ်း နေထိုင်နိုင်တဲ့စနစ်ကို ခွင့်ပြုပေးမှာဖြစ်ပေမယ့် နှစ်နိုင်ငံသား ခံယူခွင့်တော့ မပေးနိုင်ဘူးလို့ တရားဝင် ကြေညာထားပါတယ်။
၁၉၈၈ ခုနှစ်က ကျောင်းသားလူငယ်တွေ အစုလိုက်အပြုံလိုက် နယ်စပ်ထွက်ခွာရာက အစပြုပြီး စစ်အစိုးရ လက်အောက် နိုင်ငံရေး၊ ပညာရေး၊ စီးပွားရေး ခြွတ်ခြုံကျမှုတွေကြောင့် ၂၀၀၈ ခုနှစ်အထိ မြန်မာနိုင်ငံကနေ ပြည်ပ တိမ်းရှောင်ထွက်ခွာမှုတွေဟာ အဆက်ပြတ် မသွားခဲ့ပါဘူး။ ထိုင်း၊ မလေးရှား၊ အိန္ဒိယ၊ ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ် နိုင်ငံတွေမှာခိုလှုံ အလုပ်လုပ်ကိုင်သူတွေ ဒီနေ့အထိ ထောင်နဲ့ချီ ရှိနေသေးသလို၊ တတိယနိုင်ငံတွေဖြစ်တဲ့ အမေရိကန်၊ ကနေဒါ၊ သြစတြေးလျ၊ နော်ဝေ၊ ဒိန်းမတ်၊ ဆွီဒင်၊ ဖင်လန်၊ ဂျာမနီ စတဲ့ ဥရောပနိုင်ငံတွေအထိ မြန်မာပြည်သားတွေ ပျံ့နှံ့ နေထိုင်လာခဲ့တယ်။ တချို့အဲဒီမှာပဲ နိုင်ငံသားတွေခံယူပြီး အခြေချ နေထိုင်နေကြပြီ။
ဒါဟာ မြန်မာနိုင်ငံ သမိုင်းတလျှောက်မှာ အစောပိုင်း ၂၆ နှစ် အုပ်ချုပ်ခဲ့တဲ့ အာဏာရှင် ဦးနေ၀င်းနဲ့ အနှစ် ၂၀ ကျော် အုပ်ချုပ်လာတဲ့ အာဏာရှင် ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး သန်းရွှေတို့ အောက်က မတူညီတဲ့ ဖြတ်သန်းမှုဖြစ်တယ်။ ၂၁ ရာစုအတွင်း ဆယ်စုနှစ်၂ စုကျော်ဟာ တိုင်းပြည်ကြီး ဖရိုဖရဲနဲ့ မြန်မာပြည်သူတွေ အသိုက်ပျက်ခဲ့တဲ့ ပြယုဂ်ဖြစ်တယ်။ ကမ္ဘာအနှံ့ မြန်မာနိုင်ငံသား သန်းနဲ့ချီပြီး ပျံ့နှံ့ နေထိုင်တာမျိုး အရင် သမိုင်းအဆက်ဆက်က မရှိခဲ့သလို၊ တပါးနိုင်ငံသားအဖြစ် လိုလိုလားလား ခံယူမှုတွေလည်း မရှိခဲ့ပါဘူး။ အများစုက ချင်း၊ ကရင်နဲ့ ကချင် စတဲ့ နယ်စွန်နယ်ဖျား တိုင်းရင်းသားတွေ ဖြစ်တယ်။
“လူသားတန်ဖိုးကို လေးစားအသိအမှတ်ပြုတဲ့ နိုင်ငံသားဖြစ်ရလို့ ဂုဏ်ယူတယ်။ ကျနော်တို့မှာ ရွေးချယ်စရာလမ်းလည်း မရှိဘူး။ ချင်းတောင်မှာနေရင် ဘာသွားလုပ်စားလို့ ရမလဲ၊ ဒီမှာနေတော့ အလုပ်လုပ်ရင်း၊ ကိုယ့်မိသားစု ဆွေမျိုးတွေ ထောက်ပံ့လို့ရတယ်။ ဟားခါးမှာ အိမ်နဲ့ခြံတောင် ၀ယ်ထားပြီးပြီ။ ဒီမှာလည်း အိမ်ဝယ်ထားပြီ” လို့ ချင်း တိုင်းရင်းသား ဆလိုင်းဘွန်ထန်းက ပြောပြတယ်။
သူဟာ လွန်ခဲ့တဲ့ ၈ နှစ်ကျော်က မလေးရှားက တဆင့် ပြန်လည်အခြေချရေး အစီအစဉ်နဲ့ နော်ဝေနိုင်ငံ ရောက်လာတာပါ။ သူတို့ မိသားစုဝင် ၅ ဦးလုံး နော်ဝေနိုင်ငံသား ဖြစ်သွားပြီ။ အနီရောင် နော်ဝေပတ်စ်ပို့ရဲ့ နိုင်ငံသား ဆိုတဲ့နေရာမှာ နော်ဝေနိုင်ငံသားလို့ ရေးထားပြီး မွေးဖွားရာ အရပ်ကိုတော့ မြန်မာပြည်လို့ ဖော်ပြထားတယ်။ ကိုသူရိန်ရဲ့ နိုင်ငံကူး လက်မှတ်လည်း အဲဒီလိုပဲ။
“နော်ဝေ နိုင်ငံသား ခံယူလိုက်လို့ ကျနော့်မှာ ဂုဏ်တွေ တက်နေတယ်လို့လည်း မခံစားမိပါဘူး၊ ကိုယ့် မွေးမိခင်ရင်းနဲ့ ခွဲခွာလိုက်သလို ပါပဲ၊ ကယ်တင်ရှင် မွေးစား အမေသာမပေါ်ရင် ကျနော်တို့ ဘ၀တလျှောက်လုံး မိဘမဲ့လို စိတ် ဒဏ်ရာတွေရနေ ဦးမယ်၊ အခုလည်း ဒဏ်ရာတွေနဲ့ ပါပဲ”လို့ သူက ဆိုပါတယ်။
“ကျနော်လည်း အများသူငါလို၊ အုတ်တချပ် သဲတပွင့်တော့ လုပ်ခဲ့ပါတယ်၊ ဆက်ပြီးလည်း လုပ်နေဦးမှာပါ၊ ကိုယ်က လွတ်မြောက် တဲ့ နိုင်ငံကို ရောက်နေပေမယ့် စိတ်က မလွတ်မြောက်ပါဘူး၊ မလွတ်မြောက်တဲ့ မြန်မာပြည်သား တယောက်လို ခံစား နေ ရ တုံးပါ”လို့လည်း ကိုသူရိန်က ဆက်ပြီး ပြောဆိုသွားပါတယ်။
မြန်မာပြည်မှာ ဒီမိုကရေစီစနစ်ကို ပီပီပြင်ပြင် အကောင်အထည်မဖော်နိုင် သရွေ့တော့ ကိုသူရိန် လို ပြည်ပနိုင်ငံသား ခံယူ ထားသူတွေလည်း စိတ် ပျော်ရွှင် လွတ်လပ်နေမယ်လို့ မထင်ပါဘူး။ ။
11 Responses	LeaveaReply Cancel reply	Your email address will not be published. Required fields are marked *Comment Name * Email * Website ohnmar November 10, 2012 - 10:48 am	သိပ်ကိုခံစားရပါတယ်။ လက်ခံပေးထားတဲ့တိုင်းပြည်တိုင်းကိုလည်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
Reply	FOX November 10, 2012 - 12:28 pm	သိပ်ကိုလေးနက်လွန်းပါတယ်…ကျွန်တော်တို့မြန်မာပြည်ကြီးမှာလည်းအဲ့လိုသဘောထားကြီးစည်းလုံးပြီး နိုင်ငံတိုးတက်ဖို့ကိုပဲ ကြည့်ကြမယ်ဆိုရင် သိပ်ကောင်းမယ်ဗျာ…
Reply	KHUN KYI HAN November 10, 2012 - 4:08 pm	GOOD NEWS.YOU GUYS ARE LUCKY.YOU WANT TO GO THERE AND “THEY WANT YOU TO COME TOO”.HOW NICE?HOPE, YOU GUYS RESPECT TO THEIR COUNTRY AND PEOPLE.ONLY GOOD MIGRANTS CAN BE GOOD CITIZENS.BE PROUD TO BE A NORWEGIAN BROTHERS.CHEERS
Reply	ဘကြီး November 10, 2012 - 8:53 pm	သူများ နိ်ုင်ငံသား လုပ်ချင်ရင် သူများနိုင်ငံ ရဲ့ ဥပဒေ နဲ့ စည်းမျဉ်း စည်းကမ်းကို လိုက်နာရမယ် ဒါမှ လူသားစင်စစ်ဖြစ်တော့မည်တည်း။
Reply	မင်းကြီးညို November 11, 2012 - 8:00 pm	နိုဘယ်လ်ဆုရှင်ကြီး ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်က နော်ဝေးအစိုးရဟာ အကြင်နာတရားနဲ့ပြည့်စုံ
တယ် နေစရာမရှိသူတွေအတွက် နေရာပေးတယ်တဲ့။ ဒါဆိုရင်အတော်ပဲ ရခိုင်ပြည်နယ်ထဲကို
ခိုးဝင်လာတဲ့ ဘင်္ဂါလီတွေကို နော်ဝေးအစိုးရကို နော်ဝေးနိုင်ငံမှာ ခိုလှုံခွင့်ပေးဖို့ တိုက်တွန်း
ကြည့်ပါလား။ နိုဘယ်လ်ဆုရှင်ကြီးရဲ့ တိုက်တွန်းချက်ကို နော်ဝေးအစိုးရက လက်ခံမလား။
နော်ဝေးအစိုးရက လက်ခံတယ်ဆိုရင်တော့ ဒေါ်စုကို ဘင်္ဂါလီတွေက ကျေးဇူးတင်ကြမယ်။
ရခိုင်တွေကလဲ သူတို့ဒေသက အမှိုက်ထုပ်တွေ မရှိတော့လို့ ဒေါ်စုကို နှစ်ဖက်လုံးကကျေးဇူး
တင်ကြမယ်။ ဒေါ်စုရဲ့ အောင်မြင်မှုကိုလဲ ကမ္ဘာက အရေးပေးလာမယ်။
Reply	Myo han November 12, 2012 - 8:12 pm	You wasarefugee too bro.Bawa ma mae ne.Ma saw kar ne.Kochin sar.
Reply	ူlady November 12, 2012 - 12:35 pm	မင်းကြီးညိုရဲ့ အဆိုကိုထောက်ခံပါတယ်..ဘင်္ဂါလီတွေသူများနိုင်ငံမှာ လူလိုနေတတ်ခဲ့ရင် ရခိုင်မှာ ဒီလိုပြသာနာတွေဖြစ်လာမှာမဟုတ်ဘူး..
Reply	An Exile man November 12, 2012 - 2:32 pm	ကျနော်လဲ မလွှဲမရှောင်သာလို့ နိုင်ငံသားဖြေရတော့မယ်ဗျာ။
အထူးသဖြင့် ခရီးသွားရင် မျက်နှာငယ်လို့ပါ။ travel document နဲ့ ခရီးသွားနေတာ အရစ်ခံရတယ်။ နိုင်ငံက ထွက်ရင် လက်မှတ်ထိုးရတယ် ပြန်ဝင်ရင်လဲ အမေးခံရသေးတယ်။ ဘာသွားလုပ်လဲ ညာလဲ။ စသည်ဖြင့်ပေါ့။ မြန်မာ ပြည်မှာ ပြန်နေဖို့လဲ နိုင်ငံရေးအပြောင်လဲ ဖြစ်ပေမယ့် အဝေးရောက် ပညာရှင်တွေ ပဲ ဖိတ်ခေါ်တယ်။ သာမန် သူတွေ ကို ပြန်ခေါ်ချင်တဲ့ပုံ မရသေးပါဘူး။ ခေါ်ခေါ် မခေါ်ခေါ် အရေးမကြီးပါဘူး မြန်မာ မှာ ကျန်ခဲ့တဲ့ မိတ်ဆွေတွေ၊ မိသားစုတွေ ဘဝ ကြောက်ကြမှု မရှိပဲ နေနိုင်လာတာ ကြည်နူးပါတယ်။ အရင်ကဆို ဟိုလူကြောက်ရ ဒီလူကြောက်ရနဲ့။ ကျနော်တို့ ပြည်ပရောက် (အရင်အစိုးရအခေါ် ပြည်ပြေး) တွေ စိတ်မှာ တော့ အိမ်လွမ်းနာ ကျနေတာတော့ ပြည်တွင်းလူတွေ မသိနိုင်ပါဘူး။
ကျနော်တို့ ပြည်ပရောက် နိုင်ငံသားတွေကိုတော့ ဗီဇာ မပေးချင်ပေမယ့်။ လဝကတွေ လဘ်စားပြီး ဘင်္ဂါလီတွေ အဆမတန်ဝင်လာတာ။ မန်းလေးမြို့ တရုတ်ပြည် ဖြစ်လာတာ ကျတော့ လက်ခံနိုင်စရာ ရှိလာတာပေါ့။ နိုင်ငံတော် ဆိုတဲ့သူတွေက တချိန်က မြန်မာပြည်မှာမွေးပြီး အကြောင်းအမျိုးမျိုးနဲ့ ပြည်ပ နိုင်ငံရောက်နေသူတွေကို ပြည်တွင်းနေ နိုင်ငံခြားသားလောက် မချစ်တာတော့သေချာတယ်။
သီတင်းကျွတ်နဲ့အတူတူ အပယ်ခံ ဘဝကနေ လွတ်မြောက်နိုင်ကြပါစေဗျာ။
ဘာပြောပြော ခုလို သီတင်းကျွတ်မှာ မိဘတွေကို ဖုန်းကနေ ကန်တော့ရတာ အကြေကွဲဆုံးပါ။ ပြန်ပရောက်တွေ အမြန်ပြန်နိုင်ပါစေဗျာ
Reply	mr TM November 13, 2012 - 8:23 pm	ကမ္ဘာ့အဆင်းရဲဆုံးနိုင်ငံကအဆင်းရဲဆုံးပြည်နယ်မှာနေတဲ့မင်းတို့ရခိုင်တွေကဘင်ဂါလီတွေကို အမှိက်ထုပ်တွေလို့ဆိုတယ်၊ကနေ့မင်းတို့လုပ်နေတဲ့အမျိုးသားရေးဆိုပြီးဘင်ဂါလီတွေကိုမောင်း ထုတ်နေတာကဘင်ဂါလီတွေရဲ့ပိုင်ဆိုင်မှုတွေကိုမက်မောပြီလူမဆန်တဲ့လုပ်ရပ်ဘဲမင်းတို့ဘယ် တော့မှဆင်းရဲမှုကနေကင်းမှာမဟုတ်ဘူး၊တရားဥပဒေစိုးမိုးရေးမရှိတဲ့မြန်မာနိုင်ငံကိုနော်ဝေးနိုင်ငံနဲ့မယှဉ်နဲ့ဆင်းရဲတဲ့နိုင်ငံသားတွေကိုသူတို့နိုင်ငံမှာနွေးနွေးထွေးထွေးနဲ့နိုင်ငံသားအဖြစ်လက်ခံ နေတဲ့အချိန်မှာမင်းတို့ကဘင်ဂါလီတွေကိုမောင်းထုတ်နေတယ်၊မင်းတို့ကပြော အုံးမယ်သူတို့ကကျူးကျော်သူတွေဥပဒေစည်းမျဉ်းစည်းကမ်းကိုချိုးဖောက်သူတွေလူ့အစွန်း ရောက်တွေလို့ ၊ဘယ်သူတွေကျူးကျော်လာသလဲ?အစိုးရကဥပဒေအရအရေးယူလိမ့်မယ်။ စည်းမျဉ်းချိုးဖောက်သူလူ့အစွန်းရောက်ဘယ်သူတွေလဲ?တောင်ကုတ်မှာလူသတ်သူတွေ အိမ်မီးရှို့ပြီးမောင်းထုတ်သူတွေတိုင်းရင်းသားမဟုတ်တဲ့နိုင်ငံသားတွေအပေါ်နိုင်ထက်ဆီးနင်း လုပ်တဲ့သူတွေဒုက္ခသယ်အတွက်အကူအညီတွေပိတ်ပင်တာတွေဘယ်သူတွေလုပ်နေတာလဲအဖြေကိုလိုခြင်ရင်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုပြန်မေးပါ၊ Ohnmar နဲ့ Fox တို့လိုရခိုင်တွေလဲနားလယ်စေချင်ပါတယ်။လူသားချင်းစာနာတဲ့စိတ်ဓါတ်ရှိလာတဲ့တနေ့မှာ မြန်မာပြည်ကြီးငြိမ်းချမ်းလာပါလိမ့်မယ်။
Reply	Min Gao November 14, 2012 - 2:00 pm	You know best how your ethnic set their hearts. We do know about you too. Could you please give up your dream of Islamic State establishment in our land? You surely are not natives nonetheless we can accept you as our citizen when appropriate conditions are met. Withafake name and disloyal mindsets we simply don’t want you as our folks. Got it and call me racist!
Reply	Sai Lao November 14, 2012 - 11:48 am	I am also missing my mother, my family, my friends and my Shanland . Hope to be come back homeland one day. New york Shan.